Home Somali News US: Madaxii hore ee CIA oo labo sano shaqo ah lagu xukumay...
Madaxii hore ee sirdoonka Maraykanka Gen. David Petraeus ayaa lagu xukumay labo sano oo shaqo arrimo bulsho ah kadib markii uu qirtay inuu bixiyey sir muhiim u ahayd dowlada Maraykanka. Sarkalankan afar xidigoodka ah ayaa sidoo kale lagu xukumey in uu bixiyo $100,000 oo ganaax ah.
Jeneraalkan oo horey usoo noqday Agaasimaha Sirdoonka CIA, isla markaana hogaaminayey ciidamadii Militariga Maraykanka ee galay dalalka Afghanistaan iyo Ciraaq ayaa kamid ahaa hogaamiyayaasha militariga ee ugu caansan dalkaasi Maraykanka, waxaana mar la hadal hayey inuu xilka Madaxweynaha isu soo taagi doono.
Jeneraalka ayaa fadeexad ka raacday kadib markii la ogaaday inuu xiriir la lahaa haweenay qoreysay buug ka hadlaya taariikhdiisa, haweenaydan oo lagu magacaabo Paula Broadwell ayaa la sheegay inay sir badan ka heshay Jeneraalka.
Marka laga yimaado fadexaada xiriirka golgol dhaafka ah, waxaa arrintan sii adkaatay markii computerada haweenaydaasi oo ay baareen ciidamada FBI laga helay sir badan oo ay lahayd hay’ada sirdoonka Maraykanka, xili Jeneraalka uu ku adkeesanayey inuusan bixin wax sir ah.
Somaliland: Gudoomiye Cirro Iyo Hogaamiye Xirsi Oo Safar Dheer Kadib Maanta Dalka Dib Ugu Soo Laabanaya
Daawo: Marwadda Koobaad Oo Ka Qaybgashay Munaasibad Lagu Xusayo Haweenka,oo Ka Dhacday Boorama